RASMI: Juventus oo la saxiixatay daafaca da’da yar ee Matthijs de Ligt & faah-faahinta heshiiskiisa. – Gool FM
RASMI: Juventus oo la saxiixatay daafaca da’da yar ee Matthijs de Ligt & faah-faahinta heshiiskiisa.
(Turin) 18 Luulyo 2019. Kooxda Juventus ayaa xaqiijisay iney la saxiixdeen da’yarka daafaca kaga ciyaara qaranka Holland Matthijs de Ligt kaas oo ugu soo wareegaya adduun dhan 85.5 Malyan oo Yuuro.
Marwada duqda ah ayaa kaga guuleysatay saxiixa xiddigaan kooxo badan oo yurub ka dhisan sida: Man Untied, Barcelona, Bayern Munich & Paris Saint Germain, wuxuuna noqonayaa muddo kadib Holandes-kii ugu horreeyay ee kooxda u ciyaara.
Bianconerri ayaa kula heshiisay dhigeeda Ajax adduun dhann 75 Malyan oo Yuuro, sidoo kalana ay shan sano kala bixiso lacagaha, sidaas darteed waxaa lagu kordhiyay 10.5 Malyan oo Yuuro taasoo ka dhigan inuu xiddigaan qiimo ahaan ku fadhinayo 85.5 Malyan oo Yuuro.
“Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday iney heshiis la gaartay dhigeeda Ajax si loo hubiyo xuquuda diiwaangalinta ciyaariyahan Matthijs de Ligt kaas oo lagu qiimeeyo 75 Malyan oo Yuuro, laguna bixinayo shan sanadood, waxaana jira qiimo koror dhan 10.5 Malyan oo Yuuro” ayuu u qornaa bayaanka lagu daabacay website-ka Juventus.
“Ciyaariyahanka & Juventus waxey saxiixdeen heshiis shan sanadood ah oo dhamaanaya 30-ka June 2024”
Waxaa la fahamsan yahay in lacagta dheeriga ah ee heshiiska lagu daray uu jeebka ku shuban doono wakiilka xiddiga Mino Riola.
Xiddigaan 20-jirsan doona bisha soo aadan ayaa ka gudbay caafimaadka, wuxuuna fasalkii qaadan doonaa 7.5 Malyan oo Yuuro, waxaana dheeri u ah gunno dhan 4.5 Malyan oo Yuuro oo ku xirnaan doonta bandhigiisa kooxda.
“Ma awoodno inaan bixino 300 milyan xilli ciyaareed kasta sida Manchester City” - Jurgen Klopp